Waa maxay walxaha ka kooban naqshadeynta boodhka Jabbaan? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | | La cusboonaysiiyay 19/03/2022 12:59 | Dhiirrigelinta
Kama hadli karno naqshadeynta garaafka iyada oo aan ka fikirin Japan, waxay ka mid yihiin walxaha ugu muhiimsan marka ay timaado si muuqaal ah farriimaha ama fikradaha u gudbiyaan.
Maanta waxaan ka hadli doonaa oo ku saabsan boodhadhka japan iyo sidaas darteed naqshada garaafka Japan oo ka sarreeya kuwa kale oo ay fududahay in la garto kuwa u fiirsada. Shaqooyinka Jabbaan waxaa si fudud loogu aqoonsan karaa isticmaalkooda midabada, xarfaha, iyo xadadka.
La si fudud bilicda ayaa u taagan qaabka japan. Waxay yiraahdeen Japanese-ku waa shaqsi lagu hibeeyay fanka heer walba, wuxuuna mar walba raadiyaa isku dheelitirnaan iyo qurux. Sidaa daraadeed naqshadeeyayaasha waxay gacan ka geystaan ​​isbeddelkan quruxda, nadaafadda iyo dhadhanka wanaagsan.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee naqshadeynta garaafka Japan ayaa noqon doona la qabsiga, sifadan waxay la xiriirtaa xikmadda.
1 Farshaxan qadiimi ah
2 Waxyaabaha ay ka kooban yihiin naqshadeynta boodhadhka Japan
3 Naqshadeeyayaasha Garaafiga Japan ee ugu Fiican
Farshaxan qadiimi ah
Japan waa mid ka mid ah wadamada sida aadka ah u saameeyay fanka iyada oo ay ku mahadsan yihiin wax-qabadkooda sida qaab-dhismeedkooda iyo farshaxankooda caagga ah.
Muddadii Edo ee 1603 ilaa 1868 ee Farshaxanka boodhka Jabbaan wuxuu bilaabay in la horumariyo by fanaaniinta xilligan. Waxay ka socotaa muraayadda ilaa warqadda si ay u taageeraan si ay u fuliyaan abuurista. Muddadan, shuqullo ay sameeyeen farshaxanada dugsiga Rinpa iyo ukiyo-e rinjiyeynta iyo daabacado ayaa soo muuqda.
Muddo dheer ayay abuureen boodhadh ku salaysan dareenka, dareenka iyada oo loo marayo istaroog fudud iyo calaamad. Waxaa mahad iska leh dugsiyada fanka iyo macalimiintii casharrada bixinaysay, waxaa soo muuqday farshaxaniyaal, sawir-qaadayaal, iyo farshaxanisteyaal, kuwaas oo ay ka mid yihiin hawlo kale.
Tan iyo markaas, Japan iyo taariikhda naqshadeynta garaafyada ayaa lala xiriiriyay iyo nuugay saameyno kala duwan Dhismaha Ruushka, dhaqdhaqaaqa De Stijl, Bauhaus iyo dhammaan dhaqanka reer galbeedka ka dib dagaalkii labaad ee aduunka.
Isku darka dhammaan saamayntaas oo lagu daray dhadhankiisa caadooyinka awoowayaasha, waxaan leenahay nashqada garaafka Japan natiijada.
Sanadkii 1868, Japan waxay noqotay waddan xoogga labaad ee dhaqaalaha adduunka taas oo ka caawisay kobaca alaabadooda, marka la eego suuq-geynta, isgaadhsiinta iyada oo loo marayo calaamadahooda ... Waxay ahayd markaas in naqshadeeyayaasha Japan ee naqshadeeyayaasha ay soo galeen ciyaarta, iyaga oo gacan ka geysanaya qaab-dhismeedkooda.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin naqshadeynta boodhadhka Japan
La habka curinta, midabada ama isticmaalka joomatari waa saddex ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee qaabka Japan. Naqshadeynta Jabbaan waxay abuurtay luqad u gaar ah iyadoo ay ugu wacan tahay asalnimadiisa adeegsiga qoraallada iyo calaamadaha sawirka.
ka Wajiyada wax lagu qoro ee loo isticmaalo naqshadaynta japan waa xadidan yihiin tani waxay kaa caawinaysaa calaamadaha calaamadaha ay la shaqeeyaan inay ka muuqdaan boodhka.
Si aad u fahamto bilicda Japanese, waa inaad fahamtaa falsafadooda nolosha, taas oo ah sababta aan nafteena u aragno qaybo faahfaahsan oo sidan oo kale ah. Naqshad garaafeedka Jabbaan ku ciyaar cillad Awood u leh in la helo qaybo asymmetries ah ama isticmaalka tirooyin aan caadi ahayn oo marar badan sida cilladda aan ku hadlayno.
Casriga ah waxaa lagu daraa asymmetrical, isbeddelkan waxaa loo yaqaan Wabi-Sabi, waxa loola jeedo waa taas Quruxda u arag mid aan qummanayn. Sii qiimaha kuwa fudud oo nadiif ah iyada oo loo marayo naqshado dareen leh.
Mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee naqshadeynta Japan waa isticmaalka qaababka ubaxa had iyo jeer waxay joogaan dhaqanka Japan si ay u matalaan calaamadaha ama dareenka. Dhanka kale, jaantusyada joomatari ama qaababka ayaa ka tarjumaya wada noolaanshaha.
Si loo soo jiito dareenka dadweynaha da'da yar, naqshadeeyayaasha waxaa ka mid ah sawir-qaadista-Japanese ama waxa la mid ah, Manga. Sawirradan waxaa lagu gartaa indhahooda waaweyn, sankooda iyo afkooda yaryar, iyo dhaqdhaqaaqyada dhow. Waxay badanaa yihiin qaybta ugu muhiimsan ee boodhka.
Isbeddel kale oo ku jira boodhadhka Japan ayaa la xidhiidha waxa kawaii, oo leh dhaqanka macaan, jilicsan. Tani waxay gacan ka geysataa dhisidda kalsoonida waxayna u keentaa summada inay u dhawaato isticmaalaha. Waxay abuuraan dareen naxariis, farxad, had iyo jeer waxyaabo wanaagsan.
Sidii aan horayba u soo sheegnay, naqshadeynta Jabbaan waxay tixgelisaa calaamadaha qadiimiga ah iyo kuwa dhaqameed, sida sawir-qaadista. Xarfaha sawiridda waxaa loo arkaa farshaxan ay wax yar maamulaan si ay u gaaraan. Waa wax caadi ah in lagu arko xarfo la sawiray oo ku dhejisan boodhadhka kuwaas oo keenaya in kuwa casriga ah lagu dhex daro kuwa caadiga ah.
Naqshadeeyayaasha Garaafiga Japan ee ugu Fiican
Qurxinta naqshadeynta garaafka ee Japan ayaa had iyo jeer laga aqoonsan doonaa adduunka oo dhan, waxay heshay abaalmarinno badan oo ay uga mahadcelinayaan wakiiladeeda ugu caansan.
Ma dooneyno inaan xirno maqaalkan annaga oo aan xusin naqshadeeyayaasha garaafka Japan ee ugu saameynta badan.
Shigeo Fukuda. Wuxuu ku dhashay Tokyo 1932. Naqshadeeye oo leh qaab u gaar ah oo isticmaalka khiyaaliga indhaha ayaa soo muuqda. Saamayn ku yeeshay isbeddelka origami. Astaantiisu waa adeegsiga sawirada madow ee asalka midabada dhalaalaya leh.
Yugo Nakamura. Waxa uu ku dhashay magaalada Nara ee dalka Japan sanadkii 1970. Waxa ay ugu yeedhaan garaadka flash-ka waxaana loo yaqaanaa mid ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu fiican aduunka.
Ikko tanaka. Waxa uu ku dhashay Nara, Japan 1930. Shaqadiisii ​​dhimashadiisa ka dib waxay sii waddaa dhiirigelinta fannaaniinta cusub. Waxa ay isku darsatay qaabkii Bari iyo reer Galbeedka.
Ryūichi Yamashiro. Wuxuu ku dhashay Japan 1920. Waxaa loo arkaa halyey xagga naqshadaynta iyo xayaysiinta. Mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan waa "Forest" boodhadh qoraal ah.
kazumasa nagai. Wuxuu ku dhashay Osaka, Japan 1929. Naqshadeeye sawir qaade iyo farshaxan sawireed. Ku guulaysta abaal-marinno badan oo loogu talagalay boodhadhkiisa. Shaqadiisu waxay tilmaamaysaa dhaqanka farshaxanka Japan.
Tadanori Yokoo. Wuxuu ku dhashay Japan 1936. Mid ka mid ah naqshadeeyayaasha iyo farshaxanada ugu guulaha badan.
Gabagabadii, waxaan tilmaami karnaa in naqshadeynta garaafyada Japan ay tahay mid gaar ah oo aan aqoonsan karno haddii aan horteena ku haysanno sababtoo ah waxay leedahay wax weyn. awoodda wax soo saar, waxay ka saartaa waxyaabaha aan loo baahnayn iyada oo aan lumin fariinteedii asalka ahayd. Waxaan u kala saari karnaa gudaha naqshadda ugu yar, waa naqshad aan dhib lahayn, kaliya waxa ugu muhiimsan ayaa la metelaya. Waa inaad u muujisaa hal-abuur si dabiici ah oo iskeed ah adigoon is-yeelyeelayn.
Isku dar isticmaalka midabada dhalaalaya, gaar ahaan casaan, dahab iyo madow, oo leh midabyo qabow iyo hooska pastel. Jabbaanku kama cabsanayaan inay tijaabiyaan midabka, taasina waa sababta ay u abuuraan isku-dhafka u muuqda mid aan macquul ahayn.
Waxaan wax badan ka baran karnaa dhaqanka Japan marka la samaynayo naqshadeena, dhaqankan waxaa jira wax badan oo la sahaminayo. Naqshadeeyayaal badan oo reer galbeed ah ayaa tixraacyo ka qaatay naqshadeynta garaafka Japan si ay u abuuraan qaab iyaga u gaar ah. Ma aha wax aan caadi ahayn in lagu daro casriga iyo kuwii hore, farshaxanno waaweyn oo Japan ah ayaa sameeyay oo ay ku guuleysteen naqshado waaweyn oo ilaa maanta ah jaangooyooyinka.
Fikrad cad haddii aad rabto inaad la shaqeyso qaabka Japan waa inaad wax badan ku muujin kartaa wax yar, waa inaad fududee si aad si fiican u gudbiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Waa maxay walxaha ka kooban naqshadeynta boodhka Jabbaan?